निर्मला हत्या प्रकरणका बम दिदीबहिनीलाइ न्याय चाहियो भन्दै सावित्री सुवेदीले यसो भनिन् – भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > भिडियो > निर्मला हत्या प्रकरणका बम दिदीबहिनीलाइ न्याय चाहियो भन्दै सावित्री सुवेदीले यसो भनिन् – भिडियो सहित
निर्मला हत्या प्रकरणका बम दिदीबहिनीलाइ न्याय चाहियो भन्दै सावित्री सुवेदीले यसो भनिन् – भिडियो सहित
admin January 28, 2019 भिडियो, समाचार 0
काठमाडौं। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको तर अनाहकमा पीडित भएको भन्दै बम दिदीबहिनीको परिवारले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। बम दिदीबहिनीसहित आमाले पत्रकारमाझ आफूहरू निरपराध भएर पनि दोषी जस्तो मानसिक र भौतिक पीडामा परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले मिडिया र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको दुखेसो पोखे।
मानवअधिकार संगठनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले अनाहकमा परिवारकै चरित्रहत्या गर्ने काम संगठनले गरेको आरोप लगाए। त्यसविरूद्ध अदालत जाने उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीले स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धान नगरी एकपक्षीय ढंगले समाचार र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो राखे।
यसै क्रममा बम दिदीबहिनीहरूलाइ कञ्चनपुरबाट राजधानी ल्याएर जिउँदो निर्मला बनाउँदै निर्मला बलात्कारपछिकाे हत्या प्रकरणमा कुनै सम्लग्नता नरहेकाे कुरा सावित्री सुवेदीले पत्रकार सम्मेलनमै बताइन् । यसका लागि सावित्री सुवेदी बम दिदीबहिनीहरूकाे घर भित्रै छिरेकाे तथा ७ दिनसम्म नजिकका छिमेकीहरूसँग बुझेर भिडियो समेत बनाएकाे कुरा बताएकि छिन् ।
खैर जे सुकै सत्य भए पनि एक दिन बाहिर अवस्य आउला तर अहिलेलाइ भने सावित्रीले पत्रकारहरूलाइ भनेका कुराहरू सुन्नै पर्ने देखिन्छ ।
भर्खरै आयो दीपक मनाङेको यस्तो खबर – पुरा हेर्नुहोस
पूर्व युवराज पारस शाहलाइ फेरि हृदयघात अचानक अस्पताल भर्ना, यस्तो अवस्था! हेर्नुस्
विराटनगरमा घट्यो अर्को दुखद घटना – सक्दो सेयर गरौ
प्रेमीसँग मोवाइलमा कुरा गर्न नदिएको भन्दै किशोरीले लिइन् बाबुको ज्यान र कम्बलले बेरेर घरपछाडि राखिदिइन्! यसरी खुल्यो रहस्य!